Union Minister U Kyaw Tin attends 9th Meeting of Myanmar-Viet Nam Joint Commission for Bilateral Cooperation – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The Myanmar delegation led by Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin arrived back Yangon yesterday evening after attending the 9th Meeting of Myanmar –Viet Nam Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) held from 11 to 12 March in Ha Noi, Viet Nam.
The 9th JCBC meeting was held at the Government Guest House of the Socialist Republic of Viet Nam on 12 March 2019 and co-chaired by U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation of Myanmar and Mr. Pham Binh Minh, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Viet Nam. During the meeting, the two sides discussed onawide range of issues, on taking concrete actions for developing the Comprehensive Cooperative Partnership between Myanmar and Viet Nam and on further strengthening bilateral relations and multi-faceted cooperation, especially in the areas of political, security, economy, trade and investment, finance and banking, agriculture, fisheries and forestry, transportation, judiciary and legal, education and training, information and communication, labour, health, natural resources and environmental conservation, science and technology, culture, sports, tourism and people to people exchanges.
They, furthermore, discussed to celebrate the 45th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries in 2020 and to encourage Myanmar’s businesses and trade promotion organizations to participate in and display products at the Viet Nam International Trade Fair- Vietnam Expo (April 2019) and Viet Nam International Food Exhibition- Food Expo (November 2019). The two sides also discussed to continue working closely and extending support to each other at regional and international fora, especially within the frameworks of ASEAN, the United Nations, WTO, ASEM and Mekong sub-regional cooperation mechanisms and to coordinate more closely during Viet Nam Chairmanship of ASEAN in 2020. At the conclusion of the meeting, two leaders of the delegations signed the Agreed Minutes of the 9th JCBC.
Myanmar Ambassador to Viet Nam U Kyaw Soe Win, senior officials from the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation, Ministry of Transport and Communications, Ministry of Commerce and the Ministry of Investment and Foreign Economic Relations also attended the meeting.
The 9th JCBC meeting was preceded by the Senior Officials’ Meeting led by U Soe Han, Director-General of the Political Department of the Ministry of Foreign Affairs of Myanmar and H.E. Mr. Nguyen Tat Thanh, Director-General of Southeast Asian-South Asian- South Pacific Affairs Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Viet Nam on 11 March 2019.
In the afternoon of 12 March, the Union Minister also attended the luncheon hosted by Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mr. Pham Binh Minh to the Myanmar Delegation at the Government Guest House.
Afterwards, Union Minister U Kyaw Tin paidacourtesy call to Mr. Nguyen Xuan Phuc, Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam at the Prime Minister’s Office at 5:30 pm.
At the meeting, they discussed matters related to further enhancement of cooperation in various sectors including political, economic, trade, investment and tourism between the two countries. They also discussed to exceed the target of bilateral trade volume to US$ 1 billion in 2020 and to further consolidate bilateral relations through enhancing exchange of visits of the leaders of the two countries.
(၉)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ-ဗီယက်နမ် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင်အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် တက်ရောက်
(၁၄-၃-၂၀၁၉ ရက်၊ ဟနွိုင်းမြို့)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် ခေါင်းဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၁ ရက်မှ ၁၂ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် (၉)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ-ဗီယက်နမ် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
(၉) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ-ဗီယက်နမ် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင် အစည်းအဝေးအား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၂ ရက်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့၊ နိုင်ငံတော် ဧည့်ဂေဟာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာဖန်ဘင်မင်းတို့မှ ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ဘက်စုံကဏ္ဍစုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာ-ဗီယက်နမ် နှစ်နိုင်ငံအကြား ဘက်စုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆက်ဆံရေး ဖော်ဆောင်ရန် လက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေးကိစ္စ၊ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေး၊ လုံခြုံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ငွေကြေးနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် သစ်တောကဏ္ဍ ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဥပဒေရေးရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၊ အလုပ်သမား၊ ကျန်းမာရေး၊ သဘာဝသယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍ၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာကဏ္ဍ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အားကစား၊ ခရီးသွားကဏ္ဍတို့တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးကိစ္စနှင့် ပြည်သူအချင်းချင်းအကြား အပြန်အလှန် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု မြှင့်တင်ရေးကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ထို့ပြင် စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် မြန်မာ-ဗီယက်နမ် သံတမန်ဆက်သွယ်မှု(၄၅) နှစ်ပြည့်မြောက်သည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားများ ကျင်းပရေးကိစ္စ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ရေး ကဏ္ဍတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ကျင်းပမည့် Vietnam Expo နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတကာအစားအသောက်ပြပွဲ Food Expo တို့တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့များ ပါဝင်ပြသရေးအတွက် အားပေးတိုက်တွန်း ရေးကိစ္စ၊ အာဆီယံ၊ ကုလသမဂ္ဂ၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၊ အေဆမ်၊ မဲခေါင်ဒေသခွဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယန္တရားများ စသည့် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာများတွင် ပိုမို နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် အပြန်အလှန် အကူအညီပေးရေးကိစ္စ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် နီးကပ်စွာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးက ပူးတွဲကော်မရှင်အစည်းအဝေး၏ သဘောတူဆွေးနွေးချက် မှတ်တမ်းအား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။
အစည်းအဝေးသို့ ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်စိုးဝင်း၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ ပူးတွဲကော်မရှင် အစည်းအဝေးမတိုင်မီ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးအား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၁ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံရေးရာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးစိုးဟန်နှင့် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အရှေ့တောင်အာရှ-တောင်အာရှ-တောင်ပစိဖိတ်ရေးရာဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ငုယင်သက်ထန်းတို့မှ ပူးတွဲသဘာပတိများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
မတ်လ ၁၂ ရက်၊ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာဖန်ဘင်မင်းမှ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား နိုင်ငံတော်ဧည့်ဂေဟာ၌ တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် နေ့လယ်စာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ညနေ ၁၇၃၀ နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာငုယင်စွမ်းဖုအား ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးတွင် သွားရောက် ဂါရဝပြုတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံအကြား နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှုပမာဏကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း (၁) ထောင် ကျော်လွန်လာစေရေးကိစ္စရပ်များ အပါအဝင် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာ တွင် အပြန်အလှန် အထောက်အကူပြုရေးနှင့် နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအကြား အပြန်အလှန် လည်ပတ်မှု ပိုမို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ချစ်ကြည်ရေး ပိုမို ကျစ်လစ်ခိုင်မာစေရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။